Dagaal khasaaro geystay oo ka dhacay Gobolka Galgaduud - Awdinle Online
Wararka laga helayo degaanka Biya Gaduud oo hoostaga Degmada Cadaado ee Gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in halkaasi ay ka dhacday israsaaseyn geysatay khasaaro dhimasho iyo dhaawac ah.
Israsaaseynta ayaa waxaa ay u dhaxeeysay maleeshiyaad isku heystay jaad ( khaad ) laga keenay dalka Itoobiya, waxaana ku dhintay laba Ruux halka 5 kale oo Shacab ah oo kamid ahaa dadka degaanka lagu dagaalamay ay ku dhaawacmeen.
Mid kamid ah dadka degaanka Biya Gaduud ayaa sheegay in marqura ay ka warheleen israsaaseynta dhex-martay labada maleeshiyo, isla markaana uu saameyn ku yeeshay isku socodka dadka Ganacsiga degaanka.
Goobta ay ku dagaalameen labada Maleeshiyyo ayaa waxaa ku baxey Odayaasha Cadaado oo ku howlan sidii loo damin lahaa murankan salka kuhaya Ganacsiga qaadka Itoobiya laga keeno si xiisadaas aysan uga dhalan xiisad kale oo abuurta in Colaad Beeleedyo ay ka dhacaab degaanka lagu dagaalamay.
Isku dhacyada maleeshiyaadka hubeysan ayaa sanadihii la soo dhaafay kusoo batay degaannada Galmudug, waxaana Wasaaradda Amniga Maamullaas ay dhowr jeer kasoo saartay digniin walow aan weli wax laga qaban.
Previous articleMadaxweynaha Puntland oo shaaciyay inay deg deg uga jawaabayaan…
Next articlePuntland oo Amar adag dul-dhigtay Shaqaale ka tirsan Hay’adaha QM